के श्रीलंकाको अर्थतन्त्र दिवालिया भएको हो ?
२०७८ पौष २८ बुधबार
काठमाडौँ । अहिले श्रीलंकाको खराब अर्थव्यवस्थाको चर्चा भैरहेको छ । पर्यटनमा आश्रीत श्रीलंकाको अर्थतन्त्र कोरोना महामारीपछि ओरालो लागेको अर्थव्यवस्थालाई सम्हाल्न हम्मे हम्मे परिरहेको छ । सन् १९९१ को भारतको अवस्था आजको श्रीलंकाको जस्तो थियो । सय ग्राम हरियो खुर्सानीको मूल्य ७१ रुपैयाँ (श्रीलंकाली रुपैयाँ), आलु प्रतिकिलो २०० रुपैयाँमा पाइने भएको छ भने एक किलो दूधको धुलोबाट सय ग्रामको प्याकेट बनाउँदै सर्वसाधारणले खरिद गर्न सक्नेछन् । ग्यास सिलिन्डरका लागि लामो लाइन छ । एक महिनामा खाद्यान्नको मूल्य १५ प्रतिशतले बढेको छ ।
सन् २०१९ को अन्त्यमा श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ७.६ अर्ब डलर थियो । यो रकम सन् २०२० मा पाँच महिनाको आयातका लागि पर्याप्त थियो । तर विदेशी ऋण र अन्य विदेशी मुद्रा भुक्तानीको तुलनामा यो अझै धेरै कम थियो ।
श्रीलंकाली रुपैयाँ २०२० को सुरुदेखि नै धेरै दबाबमा थियो । श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २०२० को अन्त्यसम्ममा ५.७ बिलियन डलर पुगेको छ र नोभेम्बर २०२१ मा बढेर १.६ बिलियन डलर पुगेको छ । श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर डब्ल्यूए विजेवर्दनाका अनुसार १.६ अर्ब डलरको रकम श्रीलंकाको आयातका लागि केवल तीन हप्ताका लागि मात्र पुग्ने बराबर हो । अमेरिकी रेटिङ एजेन्सी फिचले श्रीलंकालाई 'सीसीसी' रेटिङ दिएको छ, जुन रेटिङ डिफल्ट हुनुअघि को हो । समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार श्रीलंकाले यस वर्ष ४.५ अर्ब डलर ऋण तिर्नुपर्नेछ, जुन जनवरी १८ बाट सुरु हुनेछ । जनवरी १८ मा ५०० मिलियन डलर अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम बन्डको भुक्तानी मिति हो । श्रीलंकाले तिर्न सकेन भने डिफल्टर हुनेछ ।
अहिले श्रीलंकाको अवस्था कस्तो छ ?
श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर डब्ल्यूए विजेवर्दनाले यसै महिना जनवरी ३ मा श्रीलंकाको आर्थिक पत्रिका डेली फाइनान्सियल टाइम्समा लेख लेखेका थिए । आफ्नो लेखमा विजेवर्दनाले श्रीलंकाको घरेलु अर्थतन्त्र दिवालिया नभएको तर विदेशी क्षेत्रको अवस्था उल्टो भएको लेखेका छन् ।
विजेवर्दनाले लेखेका छन्, ‘धेरैले श्रीलंकालाई दिवालिया देश भनिरहेका छन् । तर यो टिप्पणी श्रीलंकाको बाह्य अर्थतन्त्रका लागि बढी उपयुक्त छ । यदि हामीले राम्ररी हेर्ने हो भने, श्रीलंकाको घरेलु अर्थतन्त्र दिवालिया भएको छैन । सरकार दिवालिया हुँदा श्रीलंकाको घरेलु अर्थतन्त्र दिवालिया हुनेछ । राजस्व पाउन छाडेपछि सरकार दिवालिया हुन्छ । जनताले कर तिर्न छाडेका छन् र नयाँ नोट छाप्नुको कुनै अर्थ छैन । अर्को चरण यो हो कि मानिसहरूले देशको मुद्रा स्वीकार गर्न छोड्छन् किनभने यसको मूल्य प्रत्येक मिनेटमा घटिरहन्छ ।
"श्रीलंकाको सरकारले अहिले यो अवस्थाको सामना गरिरहेको छैन । श्रीलंकाको कर राजस्व अझै पनि यसको जीडीपीको ९ प्रतिशत हो, यद्यपि यो ऐतिहासिक रूपमा कम स्तर हो । मानिसहरूले आफ्नो मुद्रा लेनदेन अझै बन्द गरेका छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा श्रीलंकाको सरकारले घरेलु अर्थतन्त्र १२ महिनासम्म चलाउन सक्छ भन्न सकिन्छ । जबसम्म सरकार दिवालिया हुँदैन, देश पनि दिवालिया हुनबाट बच्नेछ । तर विजेवर्दना भन्छन्, ‘श्रीलंकाको बाह्य अर्थतन्त्र घरेलु अर्थतन्त्रभन्दा पूर्णतया फरक छ । उनी भन्छन्, ‘विदेशी क्षेत्रमा सबै सामान्य हुनुको अर्थ तपाईसँग पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । यो बचत खाता जस्तै हो । हालको आम्दानी कम हुँदा यो ब्यालेन्स बाहिरबाट अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्न उपयोगी हुन्छ ।
मानौं तपाईको हालको आम्दानी रु १०० छ र रु १५० खर्च गर्न चाहनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा तपाईले आफ्नो बचत खाताबाट ५० रुपैयाँ लिन सक्नुहुन्छ । यदि बचत खाता खाली छ भने, तपाईंले कसैबाट ऋण लिनु पर्छ । यदि तपाईंलाई ऋण दिने कोही छैन वा तपाईंले उसको ऋण तिर्नुहुनेछ भन्ने निश्चित छैन भने, यहाँबाट स्थिति जटिल हुन्छ । श्रीलंकाको अवस्था पनि यस्तै छ ।
विजयवर्दनाका अनुसार विदेशी मुद्रा प्रवाह रोकिएपछि श्रीलंकाको वैदेशिक व्यापार ठप्प भएको छ । उनले लेखेका छन्, ‘केन्द्रीय बैंकले कृत्रिम रूपमा एक डलरको मूल्य २०३ रुपैयाँमा राखेको छ । तर, विदेशी मुद्राको अभावका कारण रु २०३ को भाउ वास्तविक छैन । यो दरमा डलर बैंकमा उपलब्ध छैन ।
आयातकर्ता र विदेशी मुद्रामा काम गर्ने व्यक्तिहरूबाट डलर लिन बैंकहरूमा लामो लाइनहरू छन् । यस्तो अवस्थामा श्रीलंकामा डलरको कालोबजारी भइरहेको छ । सामान्य अवस्थामा तोकिएको मूल्यभन्दा दुई रुपैयाँ बढी तिरेर कालोबजारी हुने गरेको भए पनि अहिले एक डलरको कालोबजारीमा निर्धारित मूल्यभन्दा ५० देखि ६० रुपैयाँ बढी तिर्नु परेको छ ।
श्रीलंकाको व्यापार घाटा पनि डरलाग्दो छ । उदाहरणका लागि चीन र श्रीलंकाबीचको द्विपक्षीय व्यापारलाई हेर्न सकिन्छ । श्रीलंका चीनमा निर्यातमा पाकिस्तान, बंगलादेश र नेपालभन्दा पछाडि छ । सन् २०२० मा चीनबाट श्रीलंकाको आयात २८ करोड डलर थियो भने सोही वर्ष श्रीलंकाले चीनबाट ४ अर्ब डलर आयात गरेको थियो ।
सिंगो दक्षिण एसिया आर्थिक संकट :
एएन सिन्हा इन्स्टिच्युट अफ सोशल स्टडीज पटनाका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डीएम दिवाकर भन्छन्, श्रीलंका मात्र होइन, दक्षिण एसियामा बंगलादेशबाहेक कसैको पनि अवस्था राम्रो छैन । प्रोफेसर दिवाकर भन्छन्, ‘भारतमा भइरहेको विकासले गरिबीको अन्त्य होइन । असमानता बढ्दै गएको छ । ग्लोबल हंगर इन्डेक्समा भारत पनि पाकिस्तानभन्दा पछाडि छ । यसको मतलब भारतको आर्थिक प्रगतिको फाइदा थोरै मानिसले पाइरहेका छन् र सबैले पाएको भए ग्लोबल हंगर इन्डेक्समा भारतको स्थिति पाकिस्तानभन्दा खराब हुने थिएन ।
प्रोफेसर दिवाकर भन्छन्, “देशको रूपमा भारत दिवालिया छैन, तर भारतको ठूलो संख्यामा जनता व्यक्तिगत रूपमा दिवालिया छन् । भोलि यो जनताले के खाने र कुन चोकमा सुत्ने हो, थाहा छैन । पाकिस्तानमा पनि यस्तै छ । भारतलगायत विश्वका अधिकांश मुलुकले रोजेको विकासको मोडल दिगो छैन ।
“चीनले पनि त्यही प्रणाली अपनाएको छ, तर त्यो पूँजीवादी राज्यद्वारा नियन्त्रित छ । चिनियाँ सरकारले ज्याक मामाथि लगाम पनि कडा बनाउँछ, तर सरकारले भारतको अर्थतन्त्रमा चोरी गर्नेहरूलाई विदेशमा फरार हुने अनुमति दिन्छ । भारतको अर्थतन्त्र ८० प्रतिशत निजीको हातमा छ र त्यसको फाइदा देशका आम जनताले पाएका छैनन् ।"
डीएम दिवाकर भन्छन्, ‘चीनको उदयपछि दिवालिया हुने अवस्थामा अब कुनै पनि देश अमेरिका समर्थक एजेन्सी आईएमएफ र विश्व बैंकको भर पर्दैन । चीन नभएको भए पाकिस्तान र श्रीलंका दिवालिया हुने उनको भनाइ छ ।
विदेशी मुद्रा किन आवश्यक छ ?
कुनै पनि अर्थतन्त्रमा पर्याप्त विदेशी मुद्रा हुनु धेरै कुरामा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विदेशी मुद्राले अमेरिकी डलरलाई बुझाउँछ । अमेरिकी मुद्रा डलरको विश्वव्यापी मुद्राको रूपमा चिनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा डलर र यूरो धेरै लोकप्रिय र स्वीकार्य छन् । विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमध्ये ६४ प्रतिशत अमेरिकी डलरमा छ । यस्तो अवस्थामा डलर आफैंमा विश्वव्यापी मुद्रा बन्छ । डलर एक वैश्विक मुद्रा हो, यसको बल र अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बल को प्रतीक ।
इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसनको सूची अनुसार विश्वभर कुल १८५ मुद्राहरू छन् । यद्यपि, यी अधिकांश मुद्राहरू आफ्नै देश भित्र प्रयोग गरिन्छ । विश्वमा कुनै पनि मुद्रा कति प्रचलित छ, त्यो त्यस देशको अर्थतन्त्र र बलियोमा भर पर्छ । विश्वको कुल व्यापारको ८५% डलरमा गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पनि डलरमा मात्र दिइन्छ । त्यसैले विदेशी बैंकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा डलर चाहिन्छ । डलरको तुलनामा कुनै देशको राष्ट्रिय मुद्रा कति बलियो छ, त्यो पनि त्यो देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कति डलर छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । विनिमय दरलाई नियन्त्रणमा राख्न विदेशी मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलन धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
कुनै देशको मुद्राको मूल्य घट्न थाल्यो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट डलर बजारमा राखिन्छ ताकि विनिमयदर धेरै नबढोस् । विदेशी मुद्राको अभावमा कुनै पनि देशले अत्यावश्यक वस्तुसमेत आयात गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
(बीबीसी हिन्दी र अन्य एजेन्सीको सहयोगमा)
कोलम्बो । श्रीलङ्काले अप्रिलमा श्रमिकबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्समा अप्रिलमा अघिल्लो बर्षको सोही महिनाको तुलनामा ५० प्रतिशतले गिरावट आएको यहाँको केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ । गत वर्षको यो अवधिको तुलनामा २४ करोड
श्रीलंकामा संकटकाल हटाइयो
काठमाडौँ । आर्थिक र राजनीतिक संकट सामना गरिरहेको श्रीलंकामा संकटकाल हटाइएको छ । झण्डै दुई सातापछि संकटकाल हटाएको हो । सरकारविरोधी प्रदर्शनबीच श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले ६ मेमा मध्यरातदेखि लागू हुने
श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्रीद्वारा माल्दिभ्सका पूर्व राष्ट्रपतिलाई विषेश जिम्मेबारी प्रदान
कोलम्बो । श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले माल्दिभ्सका पूर्व राष्ट्रपति तथा सभामुख मोहम्मद नाशिदलाई विषेश जिम्मेवारी दिएका छन् । आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्कटमा परेको श्रीलङ्काको लागि राहत संकलन गर्न संयोजनकारी भूमिका
पोखराको मतगणना सकियो, कसले कति मत पाए ?
तिलोत्तमाको मेयरमा काँग्रेसको अग्रता
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मिश्रित प्रतिक्रिया